Kala-baxa iyo Iskuduwaha ganacsiga ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Kala-Bixinta Forex iyo Is-beddelka
Go'aaminta kala duwanaanshaha iyo isku duubnaanta muuqaal ahaan ama adeegsiga tilmaamayaasha farsamada waxay ka caawineysaa ganacsadaha inuu si dhakhso leh u arko xawaare hoose ama ka sareeya, sii socoshada ama dib u noqoshada isbeddelka. Tani waa mid ka mid ah aaladaha ugu fiican ee loogu talagalay sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah iyo gaarista natiijooyinka ganacsiga ugu fiican.
Dhammaan tilmaamayaasha farsamada iyo qaababka gorfaynta shaxda waxay ku shaqeeyaan xogta taariikhiga ah, sidaa darteed ma bixiyaan saadaalin 100% sax ah. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanshuhu wuxuu noqon karaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee calaamadaha ganacsiga , oo muujinaya sida suuqa u dhaqmi karo mustaqbalka dhow hanti kasta oo ganacsi.
Aynu marka hore qeexno ereyada isu-imaatinka iyo kala-noqoshada .
Isku-shaandhayntu waxay sharraxaysaa xaalad ay sicirka qiimaha hantidu iyo qiimaha hanti kale, tusmo ama shay kasta oo kale oo la xidhiidha ay isla jihada u socdaan. Tusaale ahaan, aan u qaadanno xaalad ay sicirka suuqyadu muujinayaan kor u kac, iyo sidoo kale tilmaamaheena farsamo. Xaaladdan oo kale, waxaan la kulannaa sii socoshada, waxaana jira suurtagalnimo sare oo ah in isbeddelku sii socon doono. Marka, halkan, qiimaha iyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa isku soo ururaya (ie raac isla jihada), ganacsadahana waa laga yaabaa inuu iska ilaaliyo iibka, maadaama qiimaha ay u badan tahay inuu sii kordho.
Kaladuwanaanta , cagsigeeda, waxay sharxaysaa xaalad ay sicirka qiimaha hantida iyo qiimaha hanti kale, tusmo ama shey kasta oo kale oo laxiriira u dhaqaaqaan jihooyin ka soo horjeeda. Tusaale ahaan, haddii aan mar kale tixgelinno xaaladda marka qiimaha suuqyadu kor u kacayo, iyo qiimaha tilmaame farsamo uu hoos u dhacayo, waxaan la kulmi doonnaa hoos u dhac ku yimaada xawaaraha, sidaas darteed, oo leh astaamo isbeddel isbeddel ah. Qiimaha iyo tilmaamaha farsamada waa isku khilaafsan yihiin, markaa ikhtiyaarrada ikhtiyaarrada adeegga ayaa dooran kara PUT-xulashada macaashka ugu badan.
Marka, kala geddisnaanta iyo isugeynta ganacsiga waxay adeegsataa aalado isku mid ah, istiraatiijiyad iyo ficillo ganacsade si loo qiimeeyo dhaqdhaqaaqa saamiyada, sarrifka lacagaha qalaad iyo suuqa cryptocurrency. Daraasad faahfaahsan oo ku saabsan nidaamka kala-baxa ee forex, waa in la sheegaa inay jiri karaan laba xaaladood oo loogu talagalay calaamadaha ganacsiga ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah : dib-u-noqoshada kor u kaca (kala-soocidda qulqulka) iyo hoos-u-noqoshada (kala-duwanaanta bearish).
Nooca caadiga ah (caadiga ah) ee ganacsiga
Kala duwanaanshaha caadiga ah ee ganacsiga (caadiga ah) waa xaalad qiimaha uu sare u kaco ama ka hooseeyo, oscillatorkuna uusan sameyn doonin wax la mid ah. Tani waa calaamadda ugu weyn ee isbeddelku dhammaanayo, waxaan sugeynaa dib u noqosho. Sidaa awgeed, istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ku saleysan aqoonsiga suurtagalnimada noocaas ah ee isbeddelka isbeddelka iyo falanqaynta soo socota ee lagu muujinayo meesha iyo xoogga ay u leedahay dib u noqoshada noocaas ah ayaa dhici karta.
Kala duwanaanshaha caadiga ah ee 'bearish' waa xaalad taas oo ay ka jirto kor u kac isla mar ahaantaana lagu gaarayo ugu badnaan waxqabad sare, taas oo aan weli lagu xaqiijin oscillator-ka. Guud ahaan, xaaladdani waxay muujineysaa isbeddel daciif ah oo kor u kaca. Xaaladahaas oo kale, oscillatorku wuxuu sameyn karaa uguyaraan cusub ama wuxuu gaari karaa laba jibbaar ama seddex laab. Xaaladda xaaladdan oo kale, istiraatiijiyaddeenna ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah waa inay noqotaa u diyaargarowga furitaanka ikhtiyaarka PUT-ka, maadaama ay jirto calaamado hoos u dhac suurtagal ah.
Kala duwanaanshaha qadiimiga ah (caadiga ah) wuxuu u maleynayaa in xaaladaha hoos u dhaca, dhaqdhaqaaqa sicirka uu gaaro hoose, taas oo aan lagu xaqiijin oscillator-ka. Xaaladdan oo kale, waxaan la kulannaa hoos u dhac daciif ah. Tilmaamuhu wuxuu ku dhufan karaa hoos udhac sare ama wuxuu gaari karaa labalaab ama seddex geesood (taas oo inta badan ku dhacda tilmaamayaasha kuxiran sida RSI ama Stochastic). Xaaladdan oo kale, istiraatijiyad fursadaha binary our waa in ay u diyaar garoobaan furitaanka oo ka mid ah CALL-doorasho, tan iyo markii ay jirto calaamad ah oo ku saabsan uptrend a suurto gal.
Kala Fogaansho Qarsoon
Marka la barbardhigo qadiimiga (caadiga ah), kala duwanaanshaha qarsoon ayaa jira marka oscillator-ku gaaro ugu badnaan cusub ama ugu yar, halka ficilka sicirka uusan sameynayn isla sidaas. Xaaladahaas oo kale, suuqa aad ayuu u daciifsan yahay dib u noqoshada buuxda, sidaas darteedna sixitaan waqti-gaaban ah ayaa dhacaya, laakiin intaa ka dib, isbeddelka suuqa ee hadda jira ayaa dib u bilaabmaya, iyo sii socoshada isbeddelka adduunka ayaa dhacaya. Kala duwanaanshaha qarsoon ee barnaamijyada calaamadaha binary wuxuu noqon karaa mid dulqaad leh (PUT) ama bullaac (WAC).
Kala weecashada baashaalka ee qarsoon waa sixitaan dhaca inta lagu jiro hoos u dhaca, iyo oscillatorku wuxuu gaarayaa meel hoose, halka qiimaha uusan sameynin, hoos u dhaca hoos u dhaca ama dhinac. Tani waxay muujineysaa calaamadaha binary auto in hoos u dhigista wali ay xoogan tahay oo ay u badan tahay inay dib u bilaabaneyso wax yar ka dib. Xaaladdaan oo kale, waa inaan midkood qabanaa ama fureynaa Dookh cusub
Kala duwanaanshaha bullish-ka ee qarsoon waa kala-duwanaansho ganacsi oo saxitaanku ku yimaado inta lagu jiro kor u kaca, tilmaamuhu wuxuu gaarayaa ugu badnaan sarre, halka qiimaha uusan sameynin, isagoo ku harsan sixitaan ama dhaqdhaqaaq dhinac ah. Calaamaddu waxay ka dhigan tahay in kor u kaca uu wali xoogan yahay, waxay u badan tahay inuu sii socdo. Xaaladdan oo kale, waa inaan qabanaa ama furnaa ikhtiyaar cusub oo CALL-ikhtiyaar ah oo ku saabsan calaamadda ganacsadaha binary otomaatiga ah.
Kala-duwanaanta la buunbuuniyay waxay guud ahaan la mid tahay kala-duwanaanta caadiga ah (caadiga ah). Si kastaba ha noqotee, kala duwanaansho la taaban karo ayaa xaqiiqo ah in qaabka dhaqdhaqaaqa sicirka halkan uu ka kooban yahay laba dushood ( ugu badnaan ) ama gunta hoose ( ugu yaraan ), oo leh heerar sare ama hoose oo ku dhow isla qadkaas. Isla mar ahaantaana, tilmaameha farsamada ayaa muujinaya dushooda ama guntooda si muuqata kor ama hoos u muuqata. Waxaad u baahan tahay xaqiijin dheeraad ah oo ka timaadda calaamadaha ganacsiga tooska ah .
Kala-duwanaanta isku-buuqsanaanta 'bearish' oo la buunbuuniyey ayaa ah xaalad qiimuhu ka sameysmo laba ugu badnaan maxalli ah ugu badnaan isla qadka (oo leh xoogaa weecasho yar yar), halka tilmaamuhu farsamo kala leexdo oo uu leeyahay heer sare oo hoose oo ah heer hoose. Xaaladdan oo kale, waxaa jira calaamad hoos u sii socota oo sii socota oo ku saabsan ikhtiyaarrada adeegga ganacsiga ikhtiyaarrada ah , xulashada ugu fiican ee tusaale ahaan annaga ayaa ah inaan qabanno ama furno ikhtiyaar dheeri ah oo PUT ah.
Xitaa istiraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah 5-15, Stochastic marar dhif ah ayey u socotaa aagagga xad-dhaafka ah waxaadna seegi kartaa heshiisyo badan oo wanaagsan. Haddii qiimaha iyo Stochastic ay bilaabaan inay u dhaqaaqaan hal jiho - waad furi kartaa ikhtiyaar!
Kala duwanaanshaha buunbuuninta ee buunbuuninta ah waxay dhacdaa marka qiimaha uu abuuro laba ugu yaraan maxalli ah isla xaddi isku mid ah, halka tilmaamaha farsamadu uu kala leexdo oo uu leeyahay hoosta labaad ee heer sare. Xaaladdan oo kale, waxaan haynaa isbeddel laba-geesood ah oo kor u kacaya, xulashada ugu fiican ee tusaale ahaan annaga ayaa ah inaan qabanno ama furno ikhtiyaar dheeraad ah oo CALL-ikhtiyaar ah.
Tilmaamaha MACD waxaa si gaar ah loogu talinayaa bilowgayaasha aan weli lahayn samirka lagama maarmaanka u ah inay sugaan dhammaan shuruudaha barta laga soo galayo in la buuxiyo. Haa, dib u dhac ayaa jira, laakiin tani waa tan kuu oggolaaneysa inaadan ku mashquulin "buuqa" oo aad si sax ah u qiimeyso xaaladda, gaar ahaan ka ganacsiga kumbuyuutarrada kormeerayaal badan .
Kala Guurista Iskucelceliska Kaladuwanaanta (MACD) - ganacsiga kala geddisan, histogram-ka MACD ee hab lagu muujiyo daqiiqadahaas oo qiimahoodu kor u kacayo ama hoos u socdo, laakiin MACD sidaas ma sameynayso. Xaaladda noocan oo kale ah waxay muujineysaa kala duwanaanshaha u dhexeeya qiimaha iyo xawaaraha. MACD waa ikhtiyaar fudud oo fudud oo lagu fahmi karo sida ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaariga ahi u muujiyo wor k on kaladuwanaanta.
Tusmada Awoodda Qaraabada (RSI) waa tilmaame ugu horreeyay ee la iibsaday oo la iibsaday si loo muujiyo isbeddel ku soo noqnoqonaya. Isticmaalka jaantuska RSI wuxuu la mid yahay isticmaalka astaamaha 'MACD histogram', howsha ugu weyn ee halkan ka jirtana waa in la garto xilliga ay qiimaha iyo RSI bilaabeen inay kala duwanaadaan. Waxay noqon kartaa tilmaanta ugu wanaagsan ee kala-geddisnaanta falanqaynta farsamada.
Tilmaamaha Stochastic waxaa loo isticmaalaa ganacsiga kaladuwan oo ah tilmaame xawaare, oo ku saleysan qiimeynta qiimaha xiritaanka hantida iyo isbarbar dhigga muddooyinkii la soo dhaafay iyo ku guuleysiga calaamadaha binary . Qaabka loo adeegsado waxay la mid tahay labadii tilmaam ee hore.
Soo koob . Kaladuwanaansho waa aalad muhiim u ah ganacsatada si ay u raadiyaan calaamadaha isbeddelka isbeddelka suuqa ee soo socda. Adoo si wax ku ool ah u adeegsanaya xilliyadaas oo kale, waxaad awoodi kartaa inaad iska ilaaliso khasaarooyinka iman kara oo aad sare u qaaddo faa'iidooyinkaaga. Had iyo jeer tixgeli qodobkan istiraatiijiyadda ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah .